Rate : 1.331
BXD : 1.361
Iftin Express oo wacdaro ka muujisey Carwada caalamiga ah ee Puntland
Shirkadda Xawaaladda ee Iftin Express oo kamid ahayd shirkadihii qaybta libaax ka qaatey hirgelinta bandhiga Carwada caalamiga ah ee Puntland, ayaa hormuud ka ahayd shirkadihii wacdaraha la yaabka leh ka dhigey bandhiga Carwada Caalamiga ah ee Puntland.
Shirkadda Iftin Express, ayaa ku lahayd laba qayb oo kala duwan goobta carwada, mid kamid ah qaybahaas ayaa ahaa Baankii bixinta iyo qabashada lacagaha ee shirkadda oo si toos ah uga shaqeynaayey Carwada dhexdeeda, dadka qaarkiid ayey u suurta gashey in iyaga oo Carwada wax ka iibsanaaya gudaheeda laga dhexwaco fariinta gaarteyna ay ahayd �Iftin Express lacag ayaa kuu taala�.
Waxyaabaha soo jiitey dadkii ka soo qaybgalay Carwada waxaa kamid ahaa in Shirkadda Iftin Express ay lacag dirista dalka dibadiisa ka dhigtey mid lacag la�aan ah ama Free markii aad joogto carwada dhexdeeda.
Ganacsato iyo dadka lacagta dira ayaa safaf dheer u galay si ay fursadaas uga faa�ideystaan, iyada oo dadku si cod gaaban iyo mid dheerba ay ku sheekaysanayeen, in shirkadda Iftin Express ay buuxisey kaalin muhim ah isla markaana lagu tilmaami karo mid shacabku iska lee yahay, waxaana kamid ahaa hadalada ku soo dhacaya dhegahaaga � Balanteenu waa Iftin Express hadda kadib�.
Dhanka kale shirkadda Iftin Express ayaa samaysey qayb muhim u ah Carwada, waxaana ay ka dhexdhistey aqal ay ka buuxaan dhamaan dhaqankii Soomaalida ee asalka ahaa, kuwaas oo ay ka midyihiin, Dhiilaha, Haruub gaalka, Kebadda iyo Lacda, Kooraha, Aleelaha, Barkinka iyo Hangoolka, iyo qaar kale oo faro badan.
Sawirada oo dhamaystiran halkan ka daawo
Shirkadda Iftin Express oo muddooyinkii danbe horumar maalinba maalinta ka danbeysa ku talaabsanaysey, ayaa dhawaan ka hirgelin doonta magaalada Bosaso Bangi caalami ah kaas oo yeelan doona dhismihii ugu bilicda samaa ee abid degaanada Puntland laga dhiso iyo adeegyo casri ah.